Afka Ingiriiska (Af-Ingiriis: English; Af-Carabi: لغة إنجليزية) waa luuqad looga hadlo dhowr wadan waxeeyna tahay luqod caalamka aad looga xishmeeyo. Asal ahaan Afka ingiriiska wuxuu ka yimi luqadda Afka Laatiiniga, waxaana lagu alifey wadanka Ingiriiska. Fiditaanka uu Afka ingiriiska ugu fidey dunida waxaa sabab u ah gumeysigii Ingiriisku uu ku gumeystey dunida barkeeda kala bar. Mar walba oo uu wadan gumeysto, Ingiriisku wuxuu ka dhigi jirey afkiisa afka dawladda iyo tan barida.
Boga "AK" halkan ayaa laga soo toosiyay.Alaska (/æskə/) waa gobol dhaca waqooyigalbeed ee cidhifta qaarada Waqooyiga Ameerika kaasi oo ka tirsan kontonka gobol ee wadanka Maraykanka.
Dhinaca kale, gobolka Alaska waa deegaanka ugu weyn kontonka gobol ee Maraykanka, sidoo kale wuxuu kaalinta afaraad kaga jiraa liiska gobolada ugu dadka yar, waxaana ku nool gobolka dad gaadhaya 735,132 qof kuwaasi oo intooda ugu badan ku dhaqan yihiin magaalada Ankoraje iyo nawaaxigeeda.
Dhaqaalaha gobolka Alaska waxaa u lafdhabar ah shidaalka, gaaska dabiiciga ah, iyo wershadaha kaluumeysiga kuwaasi oo ah kheyraad aad ugu qani ah deegaanada gobolka Alaska.
Waxaa iyadna dhaqaalaha aad u kaba dalxiiska iyo siyaarada joogtada ah ee caalamka oo dhan.
In kastoo kumanaan sano lagu soo noolaa deegaanda Alaska, hadana dunidu waxay si fiican u baratey gobolka iyo sheekooyinkiisa wixii ka dambeeyay qarnigii 18aad goortaasi oo la ogaaday kheyraadka ku keeydsan iyo nolosha ka jirta deegaanada Alaska.
Markii ay taariikhdu ahayd Maarso 30, 1867dii ayaa dowlada wadanka Maraykanka iibsatay gobolka Alaska, taasi oo siisay boqortooyadii Ruushka lacag dhan US$ 7.2 milyan. Dhulka Alaska marka lagu qiimeeyo lacagta dowlada Maraykanku ka bixisey waxay noqoneysaa labo senti halkii akre ee dhul ah ($4.74/km2).
Barbados waa wadan jasiirado ka sameesan oo ku yaalo Karabiya. Waa jasiirada ugu yar aduunka, laakiin dadka aad ee iskuugu dhowyihiin. Jasiiradaan waxaa degen dad gaaraayo ilaa 300,000 oo qof.
Boga "UN-HABITAT" halkan ayaa laga soo toosiyay.Barnamijka Deegaanka Dadka Qaramada Midoobay (Af-Ingiriis: United Nations Human Settlements Programme, loo soo gaabiyo: UN-HABITAT; Af-Carabi: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) waa wakiil khaas ah oo Ururka Qarama Midoobay u qaabilsan deegaanka dadka iyo kobcinta horumarka magaalooyinka.
Ururka UN-HABITAT waxaa la sameeyay 1978 magaalada Faannkuver wadanka Kanada wakhtigaasi oo la odhan jirey "Habitat I".
Ururku wuxuu xarunta sare ku leeyahay magaalada Nayroobi wadanka Kenya.
Belise (Belize) wa wadan yar oo ku yaalo Bartamaha Ameerika, dhinaca Badda Karabiya.
wadankaan waxoo xuduud la leeyahay wadamada Meksiko iyo Guatemala.
Kani waa maqaal ku saabsan magaalada Detroit, Mishiigan, Maraykanka.Dhetroyt, Detroit (/trɔɪt/) waa caasimada ugu dadka badan gobolka Michigan wadanka Maraykanka, iyo magaalada ugu weyn ee xigta xadka Maraykanka iyo Kanada. Sidoo kale Dhetroyt waa fadhiga dowlada degmada Wayne, goobta ganacsi, dhaqan, dhaqaale, gaadiid iyo dhaqdhaqaaq badan gobolkaasi Mishiigaan.
Guud ahaan, caasimada Dhetroyt waa xarunta dhaqaalaha sadexaad ee gobolka Midwest; waxaa ka horeeya magaalooyinka Chicago iyo Minneapolis.
Magaaladu waxay si fiican u soo shaacbaxdey horaantii qarnigii 21aad, goortaasi ooy ka faa'iideysatey dhismaha wadooyinka tareenka, laamiyada waaweyn iyo wadooyinka isku xidha gaadiidka taasi oo suurtogelisay socodka alaabaha iyo ganacsiga magaalada.
Deegaanka waqooyi ee Caasimada Dhetroyt ee loo yaqaano Dhetroyt-Windson waa xarunta xidhiidhisa wadanka Maraykanka iyo dalka Kanada, taasi oo leh bulsho dhan 5,700,000. The Detroit metropolitan region holds roughly one-half of Michigan's population.Si kastaba ha ahaatee, Caasimada Dhetroyt waxaa aduunka looga yaqaanaa "Caasimada Gaadiidka", sababtoo ah waa deegaanka koowaad ee ugu soo saarid badan guud ahaan gaadiidka lagu isticmaalo wadanka Maraykanka gudahiisa iyo kuwa loo dhoofiyo caalamka intiisa kale.Wershadaha gaadiidka ee magaalada Dhetroyt waxay waligeedba u ahayd lafdhabar miisaanka wadanka Maraykanku ku leeyahay beesha caalamka, taasi oo magaaladani ahayd meeshii ugu soo saarka badneyd gawaadhiga dagaalka wakhtigii Dagaalkii Labaad ee Aduunka.Waxaa intaas dheer, Caasimada Dhetroyt waxay caan ku tahay heesaha, taasi oo lagu naaneyso Caasimada Heesaha iyo Motown oo looga dan leeyahay sida dadka magaaladu ugu qoto dheer yihiin fanka iyo suugaanta wadanka Maraykanka.
Sanadihii u dhexeeyay 2000 ilaa 2010ka waxaa isbedel xoog leh ku yimid bulshada magaalada, taasi oo hoos u dhac ku yimid ilaa 25%, midaasi oo ka saartey booskii marka hore ku jirtey ee caasimada 10aad ee ugu dadka badan oo ay noqotey mida 18aad ee wadanka Maraykanka. Waxaana tirokoob la sameeyay sanadkii 2010, lagu ogaaday in bulshada magaaladu tahay 713,777, halka sanadkii 1950ka ay ka lahayd bulsho 1.8 milyan oo dad ah.
Hoos u dhaca bulshada waxaa lagu eedeyaa hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha, shaqooyinka iyo wershadaha magaalada; kuwaasi oo keenay in dad badan ka guuraan ayagoo raadsanaya meelo dhaqaale dhaama.
Si looga hortago bulsho yaraanta soo waajahday magaalada ayaa dowladaha gobolka iyo federaalka wadanka ayaa iska kaashaday sidii loo abuuri lahaa fursado shaqo, loo kobcin lahaa dhaqaalaha iyo adeega bulshada. Waxaa dowlada gobolka Mishiigaan oo kaashanaysa dowlada Federaalku ku guulaysatay ineey abuurto goobo dhiirigeliya dhaqaalaha, horumarka iyo adeega bulshada.
In kastoo horumarku iska koobnaa, laakiin talaabooyinkaasi waxay baajiyen in caasiamda Dhetroyt hoos u dhac weyn sii sameeyso, waxaana sanadan dambe muuqda hidiilo iyo horumar kor u soo kicid ah.
Kani waa maqaal ku saabsan "dhirta". Bogag kale fiiri Geedaha iyo beeraha.Dhir (Af-Ingiriis: plant; Af-Carabi: نبات) sidoo kale loo yaqaano Dhirta Cagaaran waa noole ka samaysan unugyo badan oo isku xidhan taasi oo dulsaaran oogada sare ee dhulka. Dhirtu waa kalmada jamcisa dhamaan geedaha noocaydooda kala duwan ee laga helo carada dusheeda, biyaha dhexdooda, buuraha iyo meelo badan oo kala duwan.
Waxa jira noocyo badan oo dhirta ah kuwaasi oo lagu qiyaaso in ay ka kooban yihiin ilaa 375,000 oo nooc. Guud ahaan dhirtu waxa ay ka kooban tahay qaar iniinyo leh (Seed plants) iyo qaar aan lahayn. Waxa kale oo ay ka kooban tahay qaar qodax leh iyo qayb aan qodax lahayn haba yaraatee. Qeybaha rasmiga ah ee dhirtu waa dhirta ubaxa leh (flowering plant), caleen-yare (carnifers), feerno, Lycopodiopsida, jirid-yare, algiya, caleenley iyo shurub.
Dhirtu waxay ka mid tahay Nooleha.
Guud ahaan waxaa jira noocyo badan oo dhir ah; kuwaasi waxaa ka mid ah: beeraha, keymaha, iyo dhuldaaqsiimeedka.
Maadaama juqraafiga dhulku kala duwan yahay, meelaha dhirtu ka baxdo aduunyada weey kala duwan tahay. Meelaha qaar waxaa ka baxa kumanaan nooc oo dhir ah, halka deegaanada qaar (sida saxareha ama lamadegaanka) ay ku yar tahay dhirtu. Maadaama noloshu ku tiirsan tahay dhirta waxaa waajib ah in la ilaaliyo jiritaanka, koritaanka iyo caafimaadka dhirta.
Habka samayska cuntada dhirta waa deeqaha koowaad ee Ogsajiinta ku dara hawoda. Markasta oo geedku cunto sameeysto Ogsajiin ayuu sii daayaa taasi oo dadka iyo xayawaanku neefsadaan.
Bariga Waqooyi Bari (ET) waa degmo xilliyeed oo ku yaalla 17 dawladood oo Maraykan ah oo ku yaal qaybta bari ee Maraykanka, qaybo ka mid ah bariga Kanada, gobolka Quintana Roo ee Mexico, Panama ee Bartamaha Aasiya, iyo Caribbean Islands.
Meelaha isticmaala Waqtiga Waqtiga Bari (EST) marka la eegayo waqtiga caadiga ah (dayrta / jiilaalka) waa 5 saacadood oo ka dambeeya Isku-xirka Universal Time (UTC-05: 00).
El Salvador waa wadan ku yaalo, Woqooyiga Ameerika ama (dhaxbartanka ameerika).
El salvador waa wadanka ugu yar woqooyiga ameerika.
Kuuba ama ENGKISH Cuba waa wadan ku yaala wuqooyiga Ameerika. Wuqooyiga waxaa ka xigo wadamada Mareykanka iyo Bahamas koonfurta waxaa ka xigto Maksiko. Kuuba wexey ka kooban tahay 15 gobol Caasimadda wadanka waa Havana...
Minnesota (/ ˌmɪnɪsoʊtə / (Sannadkan maqlaa) waa gobol ku yaalla gobollada Upper Midwest iyo waqooyiga ee Maraykanka. Minnesota waxaa loo aqoonsaday inay tahay waddanka 32aad ee Maraykanka bishii May 11, 1858, oo laga sameeyay qaybta bari ee Gobolka Minnesota. Gobolka wuxuu leeyahay tiro ballaadhan oo haraha ah, waxaana loo yaqaan 'slogan "Land of 10,000 Harag". Qorsheha rasmiga ah waa L'Etoile du Nord (Faransiiska: Star of the North).
Misir (Af-Ingiriis: Lentil; Af-Carabi: عدس) magaca Saynis yahay "Lens culinaris" waa geed leh midho firiley ah oo la qoys ah bahda digirta.Midhaha misirku waa kuwo yaryar, wareegsan sida goobada, khafiif ah, qolof ama dahaadh sare oo fudud leh, isla markaana midabo kala duwan leh taasi oo ku xidhan deegaanka, carada, nafaqada geedku helo iyo cimilada. Geedka misirku wuxuu gaadhaa ilaa 40 sentimitir dhererkiisu, midhahiisuna waxay ku dhex jiraan qolof wareegsan.
Toronta waa magaalo oo kuyaalo dalka Kanada.
Ururka Adeega Duulista Caalamiga (Af-Ingiriis: International Civil Aviation Organization) waa hayad khaas u qaabishan Qaramada Midoobay Gaadiidka Diyaaradaha Rayidka ah. Astaanta ururkan waa I C A O oo laga soo gaabiyay magaca.
Waxaa la sameeyey 4 Abril, 1947 waxaa xarunta uguwayn kutaalaa wadanka Kanada, shaqadeeduna waxa ay tahay habaynta iyo iskudubaridka howlaha duulimaadyada si looga nabadgalo dhibaato ka dhacda howlaha duulimaadyada.
ICAO Waa afar xaraf oo laga soo qaatay (International Civil Aviation Organization).
Dhamaan garoomada caalamka ayaa loo isticmaalaa.
ururku waxa uu qabtaa ama uu ku shaqaleeyahay isusocodka diyaaradaha aduunka ee iskaga gooshaya xuduudaha iyo ka hortagga wixii qalad ah iyo baaritaanka marka ay dhacdo dhibaato la xiriirta dulimaad.
"Boga "IAEA" halkan ayaa laga soo toosiyay.Wakaalada Awooda Atomik Aduunka (Af-Ingiriis: International Atomic Energy Agency, loo soo gaabiyo: (IAEA); Af-Carabi: الوكالة الدولية للطاقة الذرية) waa urur caalami ah oo ka shaqeeya isla markaana dhiirigeliya isticmaalka awood nukliyeer amaan ah oon cidna halisgelin kari, iyo in laga maarmo (tanaasulo) haysashada hub nukliyeer oo loo isticmaali karo awood ciidan (milatary power)
Xayawaan (Af-Ingiriis: animal; Af-Carabi: حيوان) waa noole ka mid ah noocyada noolaha.
erayga "xayawaan" wuxuu ka yimid Af Carbeedka, dhiggiisa Af soomaaligana waa "bahal".
Bahalladu wey kala duwanyihiin. Qaarkood waxay ku noolyihiin dhulka dushiisa, qaarna waxay ku noolyihiin badaha iyo wabiyada. Jaad ka mid ah bahallada waxay awoodaan in ay ku noolaadaan bad iyo berriba, sida raxa (halkani bad waxaan ula jeednaa biyaha).
5- Cayayaan: Cayayaanka waa qeyb ka mid ah xayawaanka oo aad uga yar-yar qeybaha kale. Sidoo kale waxaa la sheegaa inaanay dhiig lahayn dhamaan cayayaanku, midaasi oo ka dhigeysa qeyb aad uga duwan dhamaan xayawaanka intiisa badan ee ku dhaqan oogada dunida.